Global Voices teny Malagasy » Fifaninanana Horonan-tsary: Solontenan’ny Mponina amin’ny andron’ny faha-64 taonan’ny Firenena Mikambana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Septambra 2009 6:42 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rincón Parra Nandika Arimalala
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Amerika Avaratra, Emirà Arabo Mitambatra, Etazonia, Fanabeazana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Toekarena sy Fandraharahàna, Zavakanto & Kolontsaina
Sary avy amin'i Basykes
Inona no ho lazainao ny mpitondra eran-tany raha omena anjara amin'izany ianao? Aleo ho fantatr'izy ireo ao anatina horonan-tsary tsy mihoatra ny telo minitra ny faharetany izay heverinao fa ilaina tokony atao mba hanaovana an'izao tontolo izao ho toerana voaaro kokoa sy tsaratsara kokoa ary hahazoanao vintana mety hitsidika ny Foiben'ny Firenena Mikambana amin'ny andro fankalazana ny faha 64 taonany.
Iraky ny Fandriampahalemana avy amin'ny Firenena Mikambana ny mpilalao sarimihetsika George Clooney, ary ao amin'ity horonantsary manaraka  navoakan'ny fahitalavitry ny Firenena Mikambana  ity, manazava ny fomba ahafahanao mandray anjara izy, ary mba ho isan'ny 5 mpandresy mety hahazo vintana handray anjara amin'ity fotoan-dehiben'ny Olo-manan-kaja ambony any amin'ny Tanànan'i New York ity.
Tsotra kely ny fitsipika arahana:
1.Forony ny video-nao, tsy atao mihoatra ny 3 minitra ny faharetany.
2. Alefao amin'ny kaontinao ao amin'ny YouTube ilay video-nao.
3. Ampio amin'ny video jerenao amin'izao fotoana izao izany, toy ny hoe VALIN'NY VIDEO.
4. Fotoana farany fisoratana: 10 Oktobra 2009
1. Ny komity no misafidy ny video 5 tsara indrindra izay napetraka tamin'ny fijerena ny votoatiny, ny maha-tokana azy sy ny famoronana.
2. Tondroina ho Solontenan'ny Mponina ireo mpandray anjara farany ireo ary hasaina any amin'ny Foiben'ny Firenena Mikambana any New York amin'ny fankalazana ny andron'ny faha 64 taonan'ny Firenena Mikambana.
3. Hahazo fitsidihina manokana ny Foiben'ny Firenena Mikambana izy ireo, haka sary miaraka aminin'ny Sekretera Jeneraly Ban Ki-moon ary hahazo toeran'ny Olo-manan-kaja ambony amin'ny kaonseritra ny Andron'ny Firenena Mikambana, izay hatao ny Zoma 23 Oktobra 2009.
Taty aoriana, kely noho ny indray mandraoka amin'ny tanana ny valin'ireo video nandeha, roa avy amin'ny Etazonia (1  sy 2  ), ny iray avy any Canada  ary iray avy amin'ny Emira Arabo Mitambatra.  Amin'ny 10 Oktobra ny fotoana farany, raiso ary ny fakan-tsarimihetsikareo, ary manaova vaovao, feno fahaiza-mamorona, ary fahaiza-mandrafitra!
(eSary avy amin'i basykes , efa zatra maneho lahatsoratra miankina amin'ny Creative Commons Attribution License )
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/09/30/3600/
 horonantsary manaraka : http://www.youtube.com/watch?v=DnIIwV0lqqM
 fahitalavitry ny Firenena Mikambana: http://www.youtube.com/user/unitednations
 2 : http://www.youtube.com/watch?v=bEAmWDA35nA
 Emira : http://www.youtube.com/watch?v=1YO9mEsXyy8